बिना सापकोटाको आमाले भनेको कुराले किन रोईन सुस्मिताकी आमा | एकाएक चितवनमा सुस्मिताका आमा बाबा - Public 24Khabar
Home Lifestyle बिना सापकोटाको आमाले भनेको कुराले किन रोईन सुस्मिताकी आमा | एकाएक चितवनमा...
बिना सापकोटाको आमाले भनेको कुराले किन रोईन सुस्मिताकी आमा | एकाएक चितवनमा सुस्मिताका आमा बाबा
गैंडाकोट नगरपालिका–४ की २१ वर्षीया बिना सापकोटा असार १५ गतेदेखि बेपत्ता छिन् । छोरी हराएको पी,रमा ४८ वर्षीया रीता सापकोटाले झपर्दी टोलस्थित घरमा ११ दिनदेखि आफूलाई सम्हा,ल्नै सकेकी छैनन् ।
काखमा सिरानी च्यापेर रुँ,दै बस्छिन्। बेला–बेला बरबरा,उँछिन्। घरमा आउने आगन्तुकलाई उनी छोरी छिटो खोजीदिन अनुरोध गर्छिन् । ‘बाआमाको पीडा बुझ्ने भगवान्जस्ती थिई छोरी । उसकै पीरले छाती पोले,को छ।
कहाँ होलिन् ? कस्तो अव,स्थामा होलिन् ?’, रीताले रुँ,दै भनिन्, ‘छोरीको पीर,ले सिरानी च्या’पेर बस्नी दिन आयो । जे भए पनि मेरी छोरी छिटो खोजी दिनुपर्‍यो।’ रीतालाई सम्हाल्न गाह्रो भएपछि भित्तामा झु’न्डा’इए’का फोटा सबै झिकिएका छन्।
नत्र छोरीको फोटो देख्यो कि उनी रोइहाल्थिन्। छोरीलाई कसैले ब’न्ध’क बनाएको आशंका छ उनको। फर्कन्छे भन्ने लागेको छ। ‘छोरीको खुसीको कुरामा कहिल्यै रोकेनौँ। बाआमाको पीडा व्यवहार बुझ्ने छोरी हो’, उनले भनिन्, ‘जुन छोराछोरीको भरमा परियो आज उसको पीडामा रु,नुपरेको छ।’
छोरीको अवस्था पत्ता लाग्ने आशामा चिना हेराउन पनि धेरै ठाउँ चहारे। नवलपुरबाट काठमाडौं, भक्तपुरका थाहा पाएसम्म सबैकोमा पुगिसके। गैंडाकोटमा हेराउने भन्नेकहाँ पुगिन्। हेराउनेले सोमबारसम्म घर फर्किने बताएपछि उनी त्यसको भरमा परेकी थिइन् । तर, सोमबारसम्म केही पत्ता नलागेपछि उनी झन् चि,न्तित बनेकी छन्
Previous articleत्रिभुवन विमानस्थलमा हेर्नुहोस्, अमेरिकाले उपहार स्वरुप दिएको १५ लाख कोरोना खोप काठमाडौं आइपुग्यो ! भिडियो हेर्नुहोस् (जानकारीका लागि सेयर गराै)
Next articleभर्खरै सर्वो’च्चको यस्तो फैसला, बालुवाटारमा खै’लाबै’ला, देउवालाई प्रधानमन्‍त्री नियुक्त गर्न यस्तो आदेश (भिडियो हेर्नुहोस)
आहा ! अनिताले तिमिले चोखो माया दिएर पो बाच्न पाए भनेपछि भगवान् जस्ता श्रीमानले यसरी कसरत गराउदै (हेर्नुस् भिडियो )
आहा ! तिजमा रातो साडिमा सजिएर अनिताले यसरी मागिन आफ्ना श्रीमानकालागि आयु (हेर्नुस् भिडियो )
सपनामा मन्दिर गएको देख्नुभयो ? यस्तो हुन सक्छ : (ॐ लेखेर सेयर गराै)